नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले पूर्वाधार विकासका लागि काम गर्ने - Khabar
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले पूर्वाधार विकासका लागि काम गर्ने
info khabar ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १२:४२
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र प्रदेश नम्बर १ को पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने सम्झौता भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट प्रदेश नं. १ को पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि परियोजना विकास तथा कार्यान्वयनको चरणमा आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो । त्यहाँको सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण र बैंकबीच समझदारी भएको छ ।
सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक डा. सरोज कोइराला र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका थिए । कार्यक्रममा निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले प्रदेश नं. १ मा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, बीमा बाम्बो प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट, उदयपुर सिमेन्ट रिभाइटजाइजेशन प्रोजेक्ट लगायतका केही पूर्वाधारका परियोजनाहरुको प्रारम्भिक अध्ययन विश्लेषण सम्पन्न भइसकेको छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वधार परियोजनाहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिई, सार्वजनिक नीजि साझेदारीको अवधारणामा स्थापित नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले प्रदेश नं. १ सँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै आगामी दिनमा मुलुकका अन्य प्रदेश सरकारहरु एवं स्थानीय निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि जाने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।